Allgedo.com » 2012 » November » 10
Home » Archive Daily November 10th, 2012
Banaanbax lagu dalbanayo in la ansixiyo xukumada oo ka socda magaalada Muqdisho
Banaanbax balaaran oo lagu dalbanayay in xukuumada cusub ee dalka Soomaaliya ay ansixiyaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Banaanbaxaasi waxa soo qaban qaabiyay Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed iyo ururada Bulshada Soomaaliya waxaana kasoo qeyb galay masuuliyiin kala duwan. Abwaan Cabdi Shire Jaamac “Ciyaar Jecel” oo ka mid ah masuuliyiinta kooxda Qeylo dhaan...
DHAGAYSO: Kulan ay Golaha Wasiirada ku hortagi lahaayeen baralamaanka oo baaqday
Wararka ka imaanata xarunta golaha shacabka ayaa sheegaya inuu baaqday kulan lagu waday in ay golaha wasiirada ku hortagaan mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya. Kulankan oo xili hore uu iclaamiyay gudoonka barlamaanka ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu baaqday waxaanna la helayaa faah faahin ku aadan baaqashada kulankaas. Xildhibaan Nuur Maxamuud Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya...
Cali Dheere: Kismaayo waxaa ay ku jirtaa gacanta gumaysiga
Afhayeenka Kooxda Alshabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage “Cali Dheere” ayaa si adag kaga hadlay xaalada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Isagoo lahadlayay saxaafada qaarkood ayuu Cali Dheere sheegay inay ogaayeen in Kismaayo ay galayso gacanta gumaysiga. “Magaalada Kismaayo waxaa markii hore ka talinayay maamul islaami ah, kasakow in ay gaalo gacanta ku dhigtay hada waxaa ay gashay...
Nabadoon caan ah oo lagu toogtay Magaalada Muqdisho
Rag Hubaysan ayaa gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waabari ku toogtay mid kamid ah odayaasha dhaqanka ee dhawaan soo xulay mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya. Alla ha unaxariistee Oday dhaqameedka ayaa la dilay ka dib markii uu soo booqday guriga mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ay isku heeb ahaayeen. War qoraal ah oo lagu qoray Bogga Internet oo taageero ayaa...